Uber ulungiselela ukuvula iZiko leTekhnoloji ePhambili eParis | Iindaba zeGajethi
Kude kube ngoku, u-Uber uhlala ezigcina iiofisi zakhe, amaziko ophuhliso kunye nemisebenzi eUnited States. Nangona le nkampani ngoku ilungiselela ukuqala kwayo ukuya eYurophu. Baza kwenza njalo ngokuvulwa kweZiko lobuChwepheshe obuPhambili, ikomkhulu labo liza kuba seParis. Inkampani izakutyala i-20 yezigidi zeerandi kweli ziko kwikomkhulu laseFrance.
Kwangokunjalo uphando luya kwenziwa, ukongeza ekudalweni kweenkonzo ze-UberElevate. Oku kuthetha ukuba iiteksi ezibhabhayo, phakathi kwezinye izithuthi, ezifuna ukwaziswa yinkampani, ziya kwenziwa okanye ziphuhliswe eParis.
Eli licandelo lenkampani elisandula ukubakho, ukuba kule veki iphulukene nomphathi wayo. Kodwa yenye yezona projekthi zibalaseleyo kule femu, kuba bafuna ukuba yenye yeenkampani zokuqala kwicandelo lokungena kwintengiso yezithuthi zomoya.
Isigqibo sika-Uber sokushiya iUnited States sibaluleke kakhulu. Ukongeza, iza ngexesha apho imisebenzi yenkampani ibuzwa kakhulu kunakuqala kwilizwe labo. Ke yonke into ibonisa ukuba ayenzeki ngamabona-ndenzile.
Ikwayinxalenye yefayile ye- Isicwangciso esitsha se-CEO yenkampani yokwenza izinto ngendlela eyahlukileyo. Kwilinge lokutshintsha ikhosi ka-Uber, ukongeza ekuphuculeni umfanekiso wayo emva kwezikrelemnqa ezininzi ezichaphazele inkampani kwiinyanga ezidlulileyo.
Yonke into ibonisa ukuba Eli ziko ayizukuphela kwalo u-Uber avule ngaphandle kwe-United States. Kukho amarhe okuba ifem iya kukhangela ezinye iindawo ezinokuhlala, kuba bafuna ikomkhulu elitsha ngaphambi kuka-2020. Kodwa akukho kwaziwayo malunga nendawo ekhethiweyo. Ngokubhekisele kwiziko eliza kuvulwa eParis, awukabi nawo umhla wokuvula okwangoku. Sinethemba lokuva ezinye iinkcukacha kungekudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Uber ukuvula iZiko leTekhnoloji ePhambili eParis
I-Vivo APEX, eneflethi yonke ngaphandle kwesotshi, ithiwe thaca ngoJuni 12